प्रचण्डका घरबेटीको बचाउ गर्दै मल अभावबारे यसो भन्छन् : कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
प्रचण्डका घरबेटीको बचाउ गर्दै मल अभावबारे यसो भन्छन् : कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल
रोपाइँकै बेला रासायनिक मलको अभाव झेलेका किसानले रोपो पहेँलो हुँदासम्म पाएका छैनन् । मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ त भएकै थियो, सरकारले पहुँचका आधारमा क्षमताहीन कम्पनीलाई आपूर्तिको ठेक्का दियो । ठेक्का पाएका कम्पनीलाई कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमण झन् ठूलो बहाना भयो । कान्तिपुर दैनिकले यसै सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
बंगलादेशसँग मल पैंचो माग्नुभएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै जताततै मल माग्ने किसानको घुइँचो देखियो । के कारणले यस्तो समस्या आयो ?
एक–दुई साताभित्र कति मल आउला ?
म विद्यार्थी हुँदादेखि नै मल अभाव भनेर सुन्ने गरेको थिएँ । कोभिड–१९ को संक्रमणकै कारण मल अभाव भयो भन्दा सामान्य मान्छेले पत्याउने अवस्था छैन । यसपटक हामीले ५ लाख टन मल ल्याउने योजना बनायौं । पुसमै नै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरियो । असारभित्र करिब १ लाख टन मलका लागि बन्दोबस्त भएको थियो ।
साढे ३ लाख टन आउनुपर्थ्यो । त्यहीअनुसार टेन्डर पनि सुरु भयो । तर टेन्डर सुरु भएसँगै कोभिड–१९ पनि सुरु भयो । मल कारखाना, जहाज, बन्दरगाह बन्द भए । प्रतीतपत्र ९एलसी० खोलिदिने बैंकहरू बन्द भए । सम्झौता भएपछि मल आउँछ भन्ने लाग्यो । अब ठेकेदारले ल्याउँछन् भन्ने सोचेका थियौं । ठेकेदारहरूले त्यो अपेक्षा पूरा गरिदिएनन् ।
शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन् । उनको राजनीतिक पहुँच छ । त्यसका आधारमा ठेक्का पाएको र समयमा नल्याउँदा कारबाही नभएको भन्ने टिप्पणी छ नि  ?
त्यसो भए २० गतेपछि के हुन्छ  ?
प्रकाशित मिति : भाद्र २१, २०७७ आईतबार ५ : ०४ बजे
जनकपुरलाई लुक्लासंग जोडेर पर्यटन प्रबर्द्धन गराउने कांग्रेस नेता निधिको प्रस्ताब